दाहालको नेतृत्वमा नेपाल डेरी एशोसिएसन सर्वसम्मत
१२ असार, हेटौंडा । हेटौंडामा भएको नेपाल डेरी एशोसिएसनको ८ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा प्रल्हाद दाहाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् । शुक्रबार र शनिबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको नेपाल डेरी एशोसिएसनको २२ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दाहालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । संघको निवर्तमान अध्यक्ष...
अध्यक्ष पुडासैनीको पहलमा आश्रममा आश्रितको स्वास्थ्य परीक्षण
११ असार, हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको सन्चो हस्पिटल प्रा. लि.ले आज शनिबार हेटौंडामा रहेको मानब सेवा आश्रममा आश्रित सहयोगापेक्षीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । अपतालका अध्यक्ष विजय पुडासैनीको पहलमा बिशेषज्ञ डाक्टरहरुको उपस्थितिमा आज आज हस्पिटलले आश्रममा रहेका सहयोगापेक्षीहरुको निः शुल्क...
हेटौंडा ९ मा भएको दुर्घटनाका घाइते टयांकर चालकको मृत्यु
११ असार, हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–९ इलाका प्रहरी कार्यलय नजिक गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा गम्भिर घाईते भएका एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नवलपरासी जिल्ला बर्दघाट–१ का सन्जीव राना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीलेले जानकारी दिए ।...
मनहरीको नीति तथा कार्यक्रमः शिक्षा तथा पुर्वाधारमा जोड
११ असार, हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न विद्यार्थीका लागि १२ कक्षासम्म निशुल्कः शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने भएको छ । शुक्रबार गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले यस्तो बताएका हुन् । विद्यालयबाट विपन्न परिवारका...
१० असार, हेटौंडा । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत हेटौंडा-९ पशुपतिनगरमा ट्यांकर र बस ठोक्किदा १६ जना घाइते भएका छन् । बाराबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको लु २ ख २७५८ नम्बरको डिजेल बोकेर आएको ट्यांकर र नारायणगढबाट बिरगंजतर्फ जाँदै गरेको बा ८ ख ६३४६ नं. को बस एक आपसमा ठोक्किएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । दुर्घटनामा बारा...